Miantsoa fiara any Japon
Japon dia fanjakana any Azia efa mivoatra miaraka amin'ny kolontsaina tany am-boalohany, tantara lava sy fanao lava. Mandeha mandeha irery any amin'ny tanin'ny Masoandro mitsangatsangana, maro ireo mpizahatany no liana amin'ny fanofana fiara.
Inona no zava-dehibe tokony hahafantarana azy?
Tena sarotra ny mividy fiara any Japana, saingy azo atao izany. Ny antony lehibe amin'ny fahasarotana dia ny fahasamihafana eo amin'ny lalàna iraisam-pirenena. Ny zava-misy dia anisan'ny mponina ao an-toerana izy ireo ho an'ny Fivondronana Genève, sy amin'ireo mponina any amin'ny firenena CIS - manatrika ny Fifanarahana Vienne.
Mba hahafahana mamakivaky ny faritry ny fanjakana amin'ny alalan'ny fiara dia mila mandinika ny zonao ianao rehefa tonga. Ny ankamaroan'ny orinasa manofana fiara fiofanana any Japon dia tsy manamarina ny antontan-taratasin'ny mpamily. Mino izy ireo fa ny mpandeha dia tsy maintsy mahafantatra ny lalàna eo an-toerana.
Ny sasany amin'ireo mpizahatany dia mety haka ny fiara amin'ny taratasiny, saingy feno ny lamandy mavesatra (avy amin'ny $ 170) sy ny fizotran'ny fitsarana. Azonao atao ihany koa ny manofa fiara iray any Japana miaraka amin'ny fanampian'ny mpitari-dalana iray. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy manana zo eo an-toerana izy.
Ny iray amin'ireo fomba amam-pandosirana ao amin'ny firenena dia fiara miaraka amin'ny mpamily iray. Ny tolotra toy izany dia atolotry ny orinasa samihafa izay mandamina tarika na tarika manokana (My Guide to Tokyo). Izy ireo dia manan-danja ho an'ireo izay tsy te hampiasa fitateram-bahoaka ary tsy afaka mifehy ny fiara.
Mba hanofana fiara, dia tokony hahafantatra sy handraisana ny sasantsasany amin'ny sasantsasany ny mpandeha:
Ao amin'ny biraom-pivarotana, dia matetika izy ireo no miteny sy mameno ny antontan-taratasy amin'ny teny Japoney. Ny teny anglisy dia fantatra amin'ny orinasa miasa any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena .
Ao amin'ny ankamaroan'ny milina dia misy mpandika teny ao an-toerana manorina, raiso an-tanana izany alohan'ny hanitsiana ireo antontan-taratasy.
Ny marika sy famantarana eo amin'ny lalana dia nosoratana amin'ny fiteny 2, na amin'ny fiteny Japoney.
Ny hetsika ao amin'ny firenena dia havaozina, izay ho an'ny maro koa dia tsy mahazatra.
Aiza no hividianana fiara ary ohatrinona ny vidiny?
Mba hanaovana fanofana dia mila mpizaha tany: pasipaoro, carte de crédit, traikefa fiara iray maharitra 1 taona ary 18 taona farafahakeliny. Ho an'ireo mpandeha an-tanindrazana dia misy toerana maromaro ahafahana maka fiara. Ny tena malaza amin'izy ireo dia:
Ny Nippon Rent-a-ca no tambajotra malaza indrindra amin'ny fanjakana, izay ahitana fiara maro samihafa;
Orix - eto dia afaka mitondra fiara karazana marika ianao;
Toyota Rent-a-car - amin'ny famoahana milina avy ao Toyota;
Nissan Rent-a-car - eto dia afaka manofa marika fiara Nissan ianao.
Ireto tranonkala fanofana Eoropeana izany, toa an-dry Avis sy Hertz, dia tsy dia mivoatra eto.
Ny vidin'ny fanofana fiara any Japana dia miankina amin'ny fahaiza-manao, marika ary andro marin'ny fampiasana. Ohatra, fiara madinika ho an'ny olona 4 dia handany 115 dolara isan'andro, ary ny minivan dia handany 250 dolara. Ny vidiny dia tsy ahitana fiantohana, raha tsy voarara tanteraka ny hidirany amin'ny firenena (ny sazy dia $ 885). Ny orinasa sasany dia mety hanome fiakaram-bola raha toa ka elaela ny fiara.
Fiofanana fiara ao Japana
Alohan'ny hanaovana sonia ny fifanarahana dia tsy maintsy vakiana amim-pitandremana izy, manara-maso ny atiny ho an'ny fitsaboana sy ny fahasimbana, hanamarina ny fisian'ny fitaovana fitsaboana voalohany, famantarana maika, famonoana afo ary fialana. Betsaka ny orinasa mitaky ny fametrahana ny fiara, izay fandaniana. Azo alaina amin'ny vola na amin'ny carte de crédit io. Amin'ny toe-javatra faharoa, dia ho voafafa ny habetsaky ny kaonty raha tsy averinao ilay fiara.
Ny fiara dia mivoaka miaraka amin'ny tank feno tanky, ilaina ny mamerina izany amin'ny toe-javatra iray ihany, mba tsy handoavana lamandy. Raha averinao ilay fiara alohan'ny fotoana nanaovana ny fifanarahana, dia handoa sazy ihany koa ianao.
Ny sazina rehetra dia tsy maintsy aloa amin'ny herinandro amin'ny alàlan'ny biraon'ny paositra. Ny fiara fiara iray any Japana dia mahatsapa raha mandeha eny ambanivohitra ianao, ary any amin'ireo tanàn-dehibe noho ny fiakaran'ny vidim-panafahana sy tsy misy farany dia tsy mahasoa.
Parkana any Japon
Ny fiara rehetra ao amin'ny firenena dia alaina ary manana milina manokana. Misy karazana fiara roa:
Municipal - afaho ny fiara ho an'ny 40-60 minitra. Aorian'izay dia mila miala amin'ny toeram-piantsonana ianao, na miala, ary avy eo miverina. Voafetra mialoha ny toerana, ny takelaka dia mifatotra eo amin'ny fitaratra. Ny sandan'ny sandam-bola dia miova arakaraka ny toerana: eo amoron'ny tanàna ny vidiny dia $ 1.5, ary ao afovoan-tanàna - $ 6 isaky ny ora.
Private kosa ireo fiara fitaterana marobe izay misy ambaratonga maro ambanin'ny tany ary manana fitaovana ivelan'ny bara. Ao amin'ny fidirana dia misy takelaka fanodinana, izay manosika ny fiara eo amin'ny lalana mifanohitra aminy, mba hahafahana mametraka ilay fiara. Eto, ankoatra ny milina fiara, misy mpiasa izay manara-maso ny fiarovana ny milina. Ny sandany dia avy amin'ny $ 9 isaky ny ora.
Ny parking sasany dia tsy manaiky ny vola alaina amin'ny alina, ary aorian'ny 03:00 dia maka ireo mpamonjy voina.
Karazan'ny fitsipiky ny fifamoivoizana
Any Japon, rehefa manofa fiara, dia tokony ho raisina an-tsaina fa maro ny lalana aloa, ary avo lenta ny vidiny. Ohatra, ny làlan-dàlana avy amin'ny seranam-piaramanidina Narita mankany afovoan- drenivohitra dia hividy eo amin'ny $ 25. Ny fandoavam-bola dia atao amin'ny mpividy amin'ny fisavana na amin'ny rafitra UTS, izay apetraka ao amin'ny trano fivoahana. Izany dia ahafahanao mivezivezy tsy mitsahatra amin'ireo sakana.
Nuans amin'ny fitsipiky ny lalana:
Raha mandao ny fiara ianao mandritra ny minitra vitsy amin'ny toerana tsy mety, dia ho voasazy avy hatrany ianao.
Ny fiarovana ny arabe ao amin'ny firenena dia miasa manerana ny toerana.
Raha mamo ny mpamily rehefa mitondra fiara, dia hesorina amin'ny zony ny zony, ary na ny mpandeha aza dia ho voasazy.
Ao anaty fiara dia tokony hisy ny zavatra rehetra, sazy $ 440.
Ho an'ny zazakely dia ilaina ny manana toeran'ny zaza.
Feno lava sy maharitra ny fifamoivoizana any an-tanàn-dehibe.
Ao Japana, misy gazoline 2 maromaro: PRE MIUM sy REGULAR, ny vidin'ny farany dia $ 1.5 isaky ny 1 litatra. Misy karazana gazy 2 ao amin'ny firenena: automatique ary mahazatra. Eo amin'ny tehina voalohany, ary aorano ny fitoeran-jiro. Ny fandoavam-bola dia amin'ny alalan'ny terminal, izay matetika no manana sakafo Japoney.
Lalàn'i Korea Atsimo
Sarintanin'ny fizahantany Ez-Link
Parks of Korea
Toerana any Laos
Fialantsasatra any Kambodza
Haavon'i Korea Atsimo
Mandehandeha any amin'ny Maldives
Musées de Singapore
Airports of Malaysia
Fitsangatsanganana tany Laos
Toeram-ponenana tranokely 4 sy tambour
Vavaka ho an'ny reny vao teraka ny 21 septambra
Ny mpaminany Isaia - fiainana, fahagagana ary faminaniana
T-shirt roa ho an'ny roa
Ankizy nahazo zaza
Ahoana no mahasoa ny melissa ary ahoana no fampiasana izany amin'ny aretina isan-karazany?
Tsikitsiky tsotra ho an'ny ankizy ao an-trano
Ny krizy amin'ny fahanterana amin'ny vehivavy
20 sarin'ny ketsa talohan'ny sy taorian'ny nanavotana azy ireo avy amina làlana
Kitapo ambaratonga eo amin'ny valindrihana
Solyanka miaraka amin'ny sausage - vahaolana tsotra ho an'ny sakafo matsiro
Ahoana ny fanangonana ny masomboly voatabia?
Ahoana ny fomba hiverenan'ilay lehilahy-Virgo?
Goddess Bastet - zava-nitranga mahaliana momba ny andriamani-bavy egyptiana fahiny
Toe-tsarimihetsika amin'ny sary mitifitra amin'ny sipa
Cat Cat Exotic
Basil - toetra mahasoa sy fanoherana
Nahoana no manonofy ny kintana?
Ny fikolokoloana ny tranon-jaza sy ny fitondrana vohoka
Ahitra amin'ny paompy
Ny fakan-tsarimihetsika matihanina - ny modely tsara indrindra ho an'ny fitifirana tsara